Spine, mutsva PS4 emulator yauya kuguta | Linux Vakapindwa muropa
Spine, itsva PS4 emulator yasvika mutaundi, uye inotibvumidza kutamba mazana emazita paLinux
Nguva pfupi yapfuura ndakapa kuyedza emumiriri wePS3 palaptop yangu. Uye zvakanaka, ini ndinongoti haina kushanda pamwe nePSPPP nekuti Hardware yangu yanga isiri yakanakisa (handikwanise kuyeuka kuti ndeipi laptop yandaishandisa). Kune vashandisi vane komputa ine simba uye vanoshandisa Linux, yakaunzwa mazuva mashoma apfuura Wakapona, PS4 emulator yaive yakavanzika mukuvandudzwa kweanenge makore maviri.
Kunge verenga PaTom's Hardware, izvozvi Spine iri kutora matanho ayo ekutanga, kana kuti, demo rekutanga richangoburitswa, inowanikwa mukati Iyi link, uko kune zvakare ruzivo rwekuti ungaiisa sei. Kana iwe uri kufunga kuti chero mutambo wePS4 unogona kumhanyisa, ndine urombo kukuudza kuti haina kuita senge, kuti runyorwa razvino rwakati pfupikei, asi rwuchawedzerwa nekufamba kwenguva.
Spine yatotibvumidza kutamba PS4 mazita paLinux, asi kwete ese
Zvatinogona kutamba muSpine izvozvi ndizvo 2D mitambo ikozvino yavapo yePCSaka, ikozvino, iwe unofanirwa kukanganwa nezve kutamba Mwari weHondo, semuenzaniso. Uye mitambo ye2D haishande zvakaringana futi, sezvaungaona kubva kuna Sonic weorenji uyo, nokutendeseka, ini pakutanga ndaifunga kuti yaive Knuckles.
Chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti Spine ichiripo haina graphical interface. Uye chinhu chakaipisisa ndechekuti iwe unofanirwa kutsvaga iyo firmware kuti iite kuti ishande, zvakafanana nemitambo (maRoms), asi izvi ndizvo zvazviri mune chero emulator mupasi.
Mune mawonero angu, ndichifunga nezvemavara uye kushomeka kweiyo graphical interface, ndinofunga vaifanira kunge vakamirira mwedzi yakati wandei kuti vazivise Spine, asi nhau dzakatoitika uye hapana achatora chinzvimbo chekutanga chePS4 emulator yeLinux. zvakare. Iye zvino inoda kukwenywa zvishoma uye, kune avo vanoda kuishandisa, vane timu ine simba riri pamusoro pevhareji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Spine, itsva PS4 emulator yasvika mutaundi, uye inotibvumidza kutamba mazana emazita paLinux
Zvinotyisa. Inotaridzika senge retro emulator. Kwete nyowani yekunyaradza emulator.
Dart 2.14 inouya neApple M1 rutsigiro, vatakuri vatsva, zvinowedzera uye nezvimwe
postmarketOS 21.06 Service Pack 2 inosvika nePhosh 0.12.1 nekumwe kugadzirisa